tao amin’ny biraony etsy Antsahavola. Fihaonana voalohany namelabelarany ny hitondrany ny ministera araka ny vinan'ny filoha, no koa nihainoany ireo hetahetan'ny rantsamangaikan'ny ministera. Aminy dia « tsy hisy fandrosoana raha tsy manome hasina ny any amin'ny fototra ». Raha nanontaniana momba ny resaka sokatra tratra tany Ampanihy ny minisitra dia nilaza mazava izy fa « nanameloka ny fanondranana ireo sokatra izay anatin’ny karazam-biby ho lany tamingana ao anaty lalàna CITES » no nidera ireo tompon'andraikitra any amin'ny faritra tamin’ny fisamborana ireo mpanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena, "satria manatratra hatrany ny tanjona napetraky ny filoha anaty velirano faha-10 ny fitantanana maharitra ny harena voajanaharintsika", hoy ihany Rtoa minisitra. Nanamarika ny minisitra Baomiavotse Vahinala Raharinirina fa efa mandeha amin’izao fotoana izao ny fanomezam-bahaolana ho an'ireo olona eny ifotony noana ka mihinana ireny sokatra ireny. Misy ny tetikasa iarahana amin’ny ministera hafa sy ny mpiara-miombon’antoka ary ny sampandraharaha misahana ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovain-jafy eny anivon’ny faritra rehetra, ahafahana manatanteraka izany. Betsaka tokoa ireo harena mampiavaka an’i Madagasikara ka mila miasa miaraka isika mba hitandrovana azy ireny.